Kinh nghiệm chọn mua tủ bếp gỗ tốt nhất, bền chắc theo thời gian | Muasalebang - Muasalebang
Kinh nghiệm chọn mua tủ bếp gỗ tốt nhất, bền chắc theo thời gian | Muasalebang
Đang Đọc: Kinh nghiệm chọn mua tủ bếp gỗ tốt nhất, bền chắc theo thời gian | Muasalebang in Muasalebang
Amakhabethe ekhishi angenye yefenisha ebaluleke kakhulu ekhishini lomndeni wonke. Lena akuyona nje indawo yokupheka nokugcina izinto ngobunono, kodwa futhi “ukugqamisa” ukwenza indawo yekhishi ibe mnandi kakhulu. Kodwa-ke, ukukhetha imodeli enhle yekhishi lekhishi lekhishi, elifanele izidingo futhi ngokuvumelana nendawo yekhishi akuyona into elula. Okuhlangenwe nakho kokukhetha ukuthenga amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni ngezansi kuzokusiza ukuba ube nekhabethe lekhishi elilula, elihlala njalo ngentengo enengqondo kakhulu.
1 Ukuhlukaniswa kwamakhabhinethi ekhishi: Yiziphi izinhlobo zamakhabethe ekhishi akhona?
1.1 Amakhabethe ekhishi elakhelwe ngaphakathi
1.2 Amakhabethe asekhishini azihlanganisele wona
1.3 Amakhabethe ekhishi aklanywe kusengaphambili kodwa angenziwa ngokwezifiso
1.4 Amakhabethe ekhishi aklanywe ngokwezifiso
2 Yiziphi izitayela zokuklama ikhabethe lasekhishini?
2.1 Dizayina amakhabethe ekhishi ngamafreyimu
2.2 Umklamo wekhabhinethi yekhishi elingenalutho
3 Izinhlobo zamakhishi ekhishi amakhabethe namuhla
3.1 Izinkuni zemvelo ekhishini amakhabethe
3.2 Izimboni ngokhuni ekhishini amakhabethe
4 Zizwa ngokukhetha ukuthenga amakhabethe ekhishi angcono kakhulu okhuni, afanele indawo yekhishi
4.1 Khetha amakhabethe ekhishi ngesitayela
4.2 Khetha amakhabethe ekhishi ngokusho kwesitayela sokuklama
4.3 Wood ekhishini iKhabhinethi impahla
4.4 Umbala wekhabethe lekhishi
4.5 Izesekeli zifakiwe
4.6 Ungathenga kuphi amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni?
5 Qaphela ukwakheka okunengqondo kwamakhabethe ekhishi
Ukuhlukaniswa kwamakhabhinethi ekhishi: Yiziphi izinhlobo zamakhabethe ekhishi akhona?
Amakhabethe ekhishi ahlukaniswe ngezinhlobo ezi-4, okuhlanganisa:
Amakhabethe ekhishi elakhelwe ngaphakathi
Amakhabhinethi ekhishi ahlanganiswe ngaphambili, amasayizi angaguquki kanye nemiklamo, akhiqizwa ngokugcwele ngumenzi. Umklamo omuhle wekhabethe lekhishi, owenziwe ngezinto eziningi ezahlukene, kungaba ukhuni, i-aluminium, ingilazi, ipulasitiki noma i-mica … futhi ihlala isikhathi eside kunamakhabethe azihlanganisele wona. Ngokwentengo, ikhabhinethi iyathengeka, ifanele iphakethe lezinto eziningi. Kodwa-ke, ubukhulu nesitayela sekhabhinethi zilungisiwe, ngakho awukwazi ukushintsha umklamo uma kunemininingwane engagculisi.
>> Bona okuningi: Imiklamo emihle yangaphakathi yekhishi
Amakhabethe asekhishini azihlanganisele wona
Ngalolu hlobo lomkhiqizo, ungakwazi ukuzihlanganisela i-aluminium noma amabhulokhi epulasitiki… ndawonye ukuze wakhe ikhabethe lekhishi eliphelele ekhaya ngokwemiyalelo yomkhiqizi. Uma kuqhathaniswa namakhabethe asekhishini ahlanganiswe ngaphambilini, le khabhinethi yekhishi ishibhile kodwa ayihlali isikhathi eside. Kwezinye izimo, amakhabhinethi ekhishi anesakhiwo esiyinkimbinkimbi, kusadingeka ucele ukusekelwa kochwepheshe ukuhlanganisa iKhabhinethi.
Amakhabethe ekhishi ayifenisha ebalulekile kuwo wonke amakhaya
Amakhabethe ekhishi aklanywe kusengaphambili kodwa angenziwa ngokwezifiso
Lolu uhlobo lwekhabhinethi olunqoba umkhawulo wamakhabethe asekhishini eyakhelwe ngaphakathi ngoba abasebenzisi bangakhetha osayizi bangokwezifiso kwezinye izingxenye ezifana nenani lama-racks, iminyango yekhabhinethi, njll ukuze ivumelane nezidingo zabo kanye nezidingo zabo. isikhala sakho sasekhishini. Kodwa uma ukhetha ukuthenga lolu hlobo lwekhabethe ekhishini, kuzodingeka ukhokhe izindleko eziphakeme kakhulu.
Xem Thêm Trên tay Realme X50 5G: Màn hình 120Hz, tản nhiệt 5 lớp,... | Muasalebang
Amakhabethe ekhishi aklanywe ngokwezifiso
Uhlobo lwekhabhinethi yekhishi lwenzelwe ngokukhethekile ubukhulu, ukuklama, umbala, impahla … ngokusho kwezintandokazi kanye nezidingo zomsebenzisi. Dala amakhabethe ekhishi amahle, ahlukile futhi ulethe uhlobo lwakho lomuntu siqu.
>> Bona okwengeziwe: Amasethi okudlela ezindlu eziqinile
Yiziphi izitayela zokuklama ikhabethe lasekhishini?
Dizayina amakhabethe ekhishi ngamafreyimu
Amakhabhinethi ekhishi anezinhlaka amakhabethe ekhishi asendulo, umklamo wangaphambili wabadwebi unohlaka lwamapulangwe ukuze ubambe umnyango wekhabhinethi. Idizayini enezinhlaka kwandisa amandla okuzala wesakhiwo futhi ungakwazi ukuhlalisa ububanzi obubanzi beminyango yekhabhinethi. Kodwa-ke, umkhawulo walolu hlobo lwekhabhinethi yekhishi ukuthi isikhala esiphambi kwekhabhinethi sizoba sincane, siphazamiseke kakhulu lapho udinga ukugcina izinto ezinkulu.
Umklamo wekhabhinethi yekhishi elingenalutho
Ikhabhinethi inomklamo oshiya ngokuphelele uhlaka lwangaphambili, ngakho-ke inobuhle obuphezulu. Ngaphezu kwalokho, umklamo ongenalutho ubuye usindise izinto zokwakha, ngakho-ke lo mugqa wekhabhinethi uthandwa kakhulu namuhla.
Dizayina amakhabethe ekhishi ngamafreyimu namakhishi ekhishi ngaphandle kwamafreyimu
Izinhlobo zamakhishi ekhishi amakhabethe namuhla
Njengamanje, amakhabethe ekhishi enziwe ngezinto eziningi ezahlukene, kodwa okuvelele kakhulu amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni ngenxa yokuqina kwawo okuphezulu, imiklamo ehlukahlukene futhi ingahlanganiswa nezikhala eziningi zekhishi.
Amakhabethe ekhishi asetshenziswa kakhulu:
Izinkuni zemvelo ekhishini amakhabethe
Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni lwemvelo angenziwa ngokhuni lwe-Walnut, izinkuni ze-Oak, izinkuni ze-Oak, izinkuni ze-Doi, izinkuni zikaKhisimusi …
– Amakhabethe amahle ekhishi enziwe ngokhuni aletha indawo ethokomele futhi ewubukhazikhazi ekhishini.
– Amandla aphezulu, umthamo omuhle wokuthwala.
– Awukho umonakalo uma uphathwa futhi ucutshungulwa kahle.
– Amakhabethe ekhishi ezinkuni zemvelo angcono ukungena emanzini kunezinkuni zezimboni.
– Ukuqiniseka okuphezulu ngenxa yekhono lokunamathela kwizikulufi nokunamathisela ngokuqinile.
– Kulula ukuhlanza nokugeza.
– Izindleko zivame ukuphakama ngoba izinkuni zemvelo ziya ngokuya zingavamile.
– Okusanhlamvu kwezinkuni zemvelo, ngakho umbala awufani.
Izinkuni zemvelo ekhishini amakhabethe aletha okunethezeka nobuhle ethokomele
Izimboni ngokhuni ekhishini amakhabethe
Eminyakeni yamuva, ngaphandle kwamakhabethe ekhishi ezinkuni zemvelo, amakhabethe ekhishi ezinkuni zezimboni nawo akhethwa kancane kancane imindeni eminingi. Izinhlobo eziningi zokhuni zezimboni zisetshenziswa njenge: MFC, Acrylic, Laminate…
Amamodeli amahle amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni lwezimboni anezinzuzo ezilandelayo:
– Isikhathi sokwakha esisheshayo.
– Intengo ishibhile kakhulu kunamakhabethe ekhishi ezinkuni zemvelo.
– Amamodeli ahlukahlukene, imiklamo, imibala.
– Ingenwa kalula umuhlwa.
Kodwa-ke, ngenxa yokuthi yenziwe ngamapulangwe kanye nezingcezu ezincane zokhuni, kulula ukusonteka ngemva kwesikhathi esithile. Ngaphezu kwalokho, amakhabethe ekhishi ezinkuni zezimboni azihlali isikhathi eside ngamanzi, kulula ukuphula isibopho seglue uma ehlangana namanzi.
>> Bona okwengeziwe: Khetha ukuthenga amatafula nezihlalo zokhuni ezishibhile nezisezingeni eliphezulu
Xem Thêm Điện Thoại Samsung Galaxy A71 128GB Đen | Muasalebang
Amakhabethe ekhishi ezinkuni ze-melamine
Izinkuni zezimboni zeMelamine, ezaziwa nangokuthi izinkuni ze-MFC, ziwuhlobo lwebhodi lezimboni ezinamekwe ngeMelamine ngaphandle. I-Melamine isetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kwangaphakathi kusuka emakhabetheni ekhishi enziwe ngokhuni kuya kumawodilophu, amatafula okudlela, amashalofu okuhlobisa …
Amakhabethe ekhishi lezinkuni le-MFC anezinzuzo kanye nokubi:
– Amakhabethe ekhishi ezinkuni ze-Melamine anemibala ecebile ngoba i-Melamine iyimpahla yokuhlobisa elula.
– Akukho ukufiphala noma ukushintsha kombala.
– Ikhabhinethi ayinawo amanzi.
– Intengo yamakhabethe ekhishi ezinkuni ze-MFC ngokuvamile ishibhile kunamakhabethe ekhishi e-Laminate ne-Acrylic.
-Ayikwazi ukuklwebheka, ayigugi kakhulu kuneLaminate.
– Kumele sicindezelwe futhi sinanyathiselwe ngqo enkabeni yokhuni njenge-MDF noma i-chipboard.
Izimboni izinkuni ekhishini amakhabethe nge ezihlukahlukene imiklamo kanye nemibala
Amakhabethe ekhishi e-Acrylic wood
Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni lwe-Acrylic avame ukudonsa amehlo kakhulu ngenxa yongqimba lwawo olucwebezelayo lwe-acrylic. Ngaphakathi kukhona izinsika zokhuni ezifana ne-MFC, MDF noma i-HDF…
– Amakhabethe ekhishi anomthamo omuhle wokuzala nokumelana nokushisa.
– Imibala ehlukahlukene, okwenza kube lula kubasebenzisi ukukhetha.
– Kulula ukuhlanza nokuhlanza.
– Awukho umuhlwa, ushintsha umbala ngemva kwesikhathi sokusetshenziswa.
– Akukho ukulwa.
– Amamodeli amahle amakhabethe ekhishi avela ezinkuni ze-Acrylic zezimboni kulula ukuwaqala.
– Ukuqina kwekhabhinethi akuphakeme uma kungaphansi komswakama isikhathi eside.
– Intengo iphezulu impela.
Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni
I-Laminate (i-High-pressure laminate), eyaziwa nangokuthi i-Formica, iyinto ekhiqizwa ubuchwepheshe be-HPL, eyakhiwe ngezingqimba ezi-3:
Imbondela: Ingubo yangaphandle imbozwe ngeglue ye-melamine esobala.
Iphepha Lokuhlobisa: Isendlalelo sefilimu siphrinta ama-swatches ombala namaphethini.
I-Kraft Paper: Isendlalelo sephepha lesisekelo senziwe kusuka ku-pulp kanye nezithasiselo, ezicindezelwa ngokuqinile ekushiseni okuphezulu.
Ngalesi sakhiwo, amakhabethe ekhishi e-Laminate enkuni anezinzuzo ezilandelayo kanye nokubi:
– Njengamakhabethe ekhishi ezinkuni ze-Acrylic, amakhabethe ekhishi e-Laminate enkuni nawo anomthamo omuhle wokuthwala nokumelana nokushisa.
– Akukho ukulwa, akukho muhlwa.
– Kulula ukucubungula nokuphatha.
– Ukwazi ukugoba.
– Amakhabethe aqinile kakhulu.
– Ilimala kalula uma itholakala emanzini amaningi isikhathi eside.
– Umklamo omuhle wekhabhinethi yekhishi nge-Laminate ayifanele isikhala sekhishi sakudala.
– Intengo iphezulu impela uma iqhathaniswa nezinye izinkuni zezimboni.
Amakhabhinethi ekhishi lezinkuni zezimboni aya ngokuya ethandwa ngenxa yobuhle bawo obuphezulu
Zizwa ngokukhetha ukuthenga amakhabethe ekhishi angcono kakhulu okhuni, afanele indawo yekhishi
Khetha amakhabethe ekhishi ngesitayela
Kuye ngendawo kanye nendawo yekhishi, ungakhetha isitayela sekhishi lekhishi lamakhishi ukuze ulethe induduzo enkulu lapho upheka.
Ikhishi elimise okwe-L lifanele izikhala ezincane
Ezinye iziphakamiso zokuklama ikhishi ezifanele indawo:
Xem Thêm Tự chế điều hòa giải nhiệt mùa hè chỉ với một chiếc quạt điện | Muasalebang
– Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni amise okwe-L afanele izindawo ezinde nezincane.
– Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni afana no-L afaneleka ezindlini ezincane, asebenzise “amakhona afile” endlini.
– Amakhabhinethi ekhishi ahambisanayo (isitayela sekhishi sicishe sifane nekhishi elenziwe nge-I kodwa elinesiqhingi sasekhishini esengeziwe noma olunye uhlelo lwamakhabhinethi asebenza ngokufana) afanele izindawo ezinkulu, okwenza kube lula ukuhamba lapho upheka.
– Amakhabhinethi ekhishi enziwe ngokhuni ane-U afanele izindawo zasekhishini ezinkulu noma eziphakathi. Amakhabethe ekhishi avulekile akuvumela ukuthi ugcine kahle izitsha zokupheka nokudla.
– Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni amise okwe-G akha ithokomele, icocekile, ifanele indawo enkulu yekhishi.
Imodeli yamakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni afanele indawo enkulu yekhishi
Khetha amakhabethe ekhishi ngokusho kwesitayela sokuklama
Kufanele ukhethe amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni ahambisana nesitayela sangaphakathi esijwayelekile sendlu yonke. Uma indawo yakho yasekhaya isesitayelani sikanokusho, ngefenisha yokhuni yendabuko, ungakhetha ikhabethe lekhishi lezinkuni lemvelo elinemininingwane ebukhali yobuciko obuhle noma ikhabethe lekhishi lezinkuni lezimboni ezinokhuni, beige, nemibala e-beige. ukhilimu noma grey.
Uma isikhala sakho sasekhaya sisesitayela sesimanje, esincane, kufanele ukhethe amakhabethe ekhishi amahle alula anemibala ekhanyayo.
Wood ekhishini iKhabhinethi impahla
Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni lwemvelo noma i-MFC, i-Acrylic, amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni Laminate… wonke anezinzuzo zawo kanye nokubi. Udinga ukucabangela ngokucophelela izidingo zakho kanye nezimo zezezimali … ukukhetha impahla yekhabhinethi yekhishi efanelekile kakhulu.
Umbala wekhabethe lekhishi
Ukukhetha umbala wamakhabethe ekhishi, cabangela lezi zindlela ezilandelayo:
– Upenda izindonga zendlu yakho ngombala onjani?
– Isitayela sakho sokuklama ikhaya?
– Ingabe ikhaya lakho linokukhanya okuningi?
Kungcono ukukhetha amakhabethe ekhishi ngemibala ehambisana nombala oyinhloko wekhishi.
Lapho uthenga amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni, kufanele futhi unake izesekeli ezihambisanayo ezifana nezihinji zekhabhinethi yekhishi, izibambo. Izesekeli kumele zibe isikhathi eside, zilula futhi zidale ukugqama okuhlaba umxhwele kwamakhabethe ekhishi.
Amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni azoba yinto evelele ukwenza indawo yekhishi ibe mnandi kakhulu
Ungathenga kuphi amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni?
Ukuqinisekisa ikhwalithi yamakhishi ekhishi kanye nezesekeli ezingagqwali, kufanele uthenge amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni emakhelini ahloniphekile anemvelaphi ecacile yomkhiqizo. Ikakhulukazi, izitolo zefenisha ezithembekile zanamuhla zonke zinenqubomgomo yewaranti yomkhiqizo ngemva kokuthenga. Ngalo mgomo, uzozizwa uvikelekile kakhulu ohlelweni lokusebenzisa amakhabethe ekhishi.
Qaphela ukwakheka okunengqondo kwamakhabethe ekhishi
– Ungabeki usinki eduze kwesitofu. Kunalokho, kufanele ubeke usinki eduze kwefasitela enkomishini epholile neyomile.
– Ukubeka isiqandisi ezingeni nekhishi kuzokwenza kube lula ngawe ukuthi uthole ukudla. Qaphela, gwema ukubeka isiqandisi eduze kwamanzi, isitofu.
– Izitofu, izitofu zegesi akufanele zibekwe eduze kukasinki, indawo yokukhipha ugesi noma eduze kakhulu nefasitela.
– Kufanele ubeke amakhabethe ekhishini ezindaweni ezipholile, gwema ukubeka eduze nezindlu zangasese.
– Ungahlobisa ikhishi lakho ngezithombe ezithile ezisho ukudla njengezinkomishi, amapuleti, izithelo…
– Uma ikhishi elihambisanayo, ikhishi elimise okwe-U, ikhishi elimise okwe-G lihlelwa, kufanele kube nendlela ebanzi eyanele abantu abangu-2 ekhishini.
>> Bona okwengeziwe: Amamodeli etafula lokudlela amahle, anesitayela esiningi, anezinto eziningi
Ngokuhlangenwe nakho okungenhla ekukhetheni ukuthenga amakhabethe ekhishi enziwe ngokhuni, ngethemba ukuthi uzozitholela imodeli yekhabhinethi yekhishi efanelekile futhi elula futhi usize indawo yakho yekhishi igqame!
Nướng thịt ở nhiệt độ bao nhiêu là thích hợp? | Muasalebang
Nước xả vải Downy Libre Enjuague Romance 1.7 lít tại nguyenkim.com | Muasalebang